Xilli roobaadka Gu’ga oo ka bilowday gobolada Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandXilli roobaadka Gu’ga oo ka bilowday gobolada Puntland
March 24, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Roob da’aya. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Xilli roobaadka Gu’ga ayaa ka bilowday gobolada Puntland ee Soomaaliya.
Roobkan oo ah “todob” kaasoo da’a horaanta Guga, ayaa laga soo sheegay in uu ka da’ay gobolo ay kamidyihiin Bari, Karkaar, Nugaal, Sanaag, Mudug iyo Gaardafuu.
Xilli roobaadka ayaa bilaabmaya iyadoo uusan jiilal ka jirin deegaanada Puntland kuwaasoo labadii xilli roobaad ee u dambeeyay ee Guga iyo Deyrta helay roobab badan oo daaq balaaran dhulka ka soo saaray.
Geeldooje iyo guulaamo ayaa cirkaa saaran, waxaana la qiyaasayaa in roobab badan ay di’i doonaan asbuucyada soo aadan.
Ciidanka PSF oo sheegay in ay Boosaaso ku qabteen xubno looga shaki qabo Al-Shabaab iyo Daacish
Garowe-(Puntland Mirror) Axmed Siciid Muues ayaa loo doortay duqa degmada Garoowe. Axmed oo loo yaqaan “Axmed Bare” ayaa helay 18 cod halka musharixii la loolamayay uu helay 9 cod wareega kowaad ee doorshada oo lagu [...]